Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » Saint Lucia dia mandefa programa maharitra maharitra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Saint Lucia dia manentana ny mpitsidika hijanona mandritra ny enina herinandro, mety amin'ny volana fahavaratra
Ny fahatokisan-tena amin'ny dia iraisam-pirenena dia mirongatra miaraka amin'ny vaksiny COVID-19 mitombo manerantany
Ny fandaharana 'Live it' dia manomboka amin'ny fotoana havaozina ny fahalianana amin'ny dia iraisam-pirenena
Raha any Saint Lucia, ny mpitsidika dia afaka miasa lavitra sy azo antoka ihany koa
Satria mitombo ny fahatokisan-tena amin'ny dia iraisam-pirenena noho ny fiakaran'ny vaksinin'ny COVID-19 manerantany, i Saint Lucia dia mamaly ny fangatahana fialan-tsasatra lava kokoa sy ireo safidy miasa lavitra. Ny toerana dia nandefa ny Live it- programa maharitra niasa izay manasa ny mpitsidika hijanona ela kokoa, hiasa lavitra ary handray ny fiainana eo an-toerana any Saint Lucia.
Saint Lucia dia manentana ny mpitsidika hijanona mandritra ny enina herinandro, mety amin'ny volana fahavaratra. Aorian'ny famenoana takelaka an-tserasera maimaim-poana, ireo mpandray anjara amin'ny programa Live it dia ampiarahina amin'ny Live it Island Specialist (mpiandraikitra fizahan-tany eo an-toerana) izay miasa ho toy ny mpitari-dalana manokana sy mandritra ny fijanonany any amin'ny hotely sy villa. Live it Island Specialists dia hanamboatra hetsika mifanaraka amin'izany, toy ny fianarana fahandro amin'ny creole, ny fizahana ny ala tropikaly, ny fisitrika amoron-dranomasina am-polony, ny fitsangantsanganana any Pitons, ny hetsika filantrana na ny fitadiavana vatosoa miafina izay tsy hitan'ny mpitsidika matetika.
"Ny programa« Live it »dia manomboka amin'ny fotoana fanavaozana ny fahalianana amin'ny fitsangatsanganana iraisampirenena amin'ny tsenantsika lehibe any Etazonia, Kanada ary UK," hoy ny minisitry ny fizahan-tany Hon. Dominic Fedee. “Amin'ny fitsidihana fohy kokoa, ny mpandeha dia voafetra amin'ny hetsika vitsivitsy fa raha mijanona ela kokoa izy ireo dia afaka mandehandeha eny an-toerana, manaova famongorana mandritra ny herintaona mihidy ary miasa lavitra koa. Miaraka amin'ny zavatra maro hitrandrahana am-pilaminana any Saint Lucia miaraka amina fangatahana fialantsasatra maharitra, namorona ity fandaharam-pianarana feno rano ity izahay mba hahafahan'ny mpitsidika miaina toy ny eo an-toerana, ary mahatsapa ho toy ny iray amin'ny fianakaviana.
Miaina toy ny Lucian eo an-toerana
Miaina izany mifanaraka amin'ny filan'ny fianakaviana, mpiasa lavitra, an'arivony taona ary isaky ny mpitsangatsangana rehetra, satria ny fitsidihana maharitra rehetra dia voahaingo sy namboarina tanteraka. Amin'ny alàlan'ny fandaharana, ny mpitsidika dia tendren'ny manam-pahaizana manokana Live it Island izay mitantana ny fifandraisana amin'ny kaonty, ny seranam-piaramanidina VIP mandray ary mamolavola zotra isan-kerinandro mba hampitomboana ny zavatra niainany.
Raha any Saint Lucia, ny mpitsidika dia afaka miasa amin'ny fomba lavitra sy azo antoka ihany koa, satria misy Wi-fi maimaim-poana atolotra manerana ny nosy amin'ny hotely, villa ary toeram-bahoaka. Ary trano fandraisam-bahiny maro no efa manolotra fandaharana asa lavitra, kojakoja ary tombontsoa manokana izay mahatonga ny asa sy ny fialan-tsasatra hifandanja.